Fitantanam-pitondrana · Jona, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Jona, 2012
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Jona, 2012
Myanmar: Voatafika Ny Tanàna Rakhine
Azia Atsinanana 28 Jona 2012
Tena avo dia avo ny fifanoherana any amin'ny faritra Rakhine any Myanmar taorian'ireo andiana loza mahery setra. Nokianin'ny mponin'ny aterineto ny vaovao Tandrefana 'tsy mitombina' izay nanazava ny fitohizan'ny fifanoherana eo amin'ireo vondrom-poko eo amin'ny firenena.
Orogoay: Tolo-dalànan'ny Governemanta Hanaovana Ho Ara-dalàna Ny Fanjifàna Marijuana
Amerika Latina 26 Jona 2012
Niteraka fanehoan-kevitra mifamahofaho ny filazana hoe manosika ny hanaovana izay hampalalaka ny famarotana ambany fanaraha-mason'ny marijuana ny governemanta Orogoaiana. Ilay tolo-dalàna dia atolotra ho toy ny fepetra hisorohana ny fanjifàna sy fanelezana ny fetanà cocaine ("pasta base" amin'ny teny Espaniola), zava-mahadomelina tena fantatra eny anivon'ny tanora Orogoaiana.. Nalaky tamin'ny fanehoan-kevitra momba ilay vaovao ireo mpiondana aterineto.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 25 Jona 2012
Panama: Firenena Amidy
Amerika Latina 20 Jona 2012
Amidy i Panama : na farafaharatsiny izay no fahitan'ny vondrona Panameana lehibe iray ny zava-misy taorian'ny nahitàny tamin-katezerana ny fomba ataon'ny governemantan'ny Filoha Ricardo Martinelli ikendrena ny handafosana ampahany midadasika amin'ireo fananan'ny firenena..Azo jerena eny an-dalambe sy eny anaty tambajotra sosialy ny hatezearan'ny vahoaka Panameana.
Azia Atsinanana 18 Jona 2012
Am-polony no maty, maherin'ny roa arivo ny trano may ary mponina telo alina no nifindra monina noho ny herisetra tao amin'ny fanjakan'i Rakhine ao andrefan'i Myanmar. Iza no tompon'andraikitra amin'ireny fahafatesana ireny ? Nahoana ny aterineto no manaparitaka fanavakavahana sy fankahalana ? Ahoana no fijerin'ny olom-pirenena tsotra ity raharaha sarotra ity ?
Eoropa Afovoany & Atsinanana 17 Jona 2012